Medaly fanamarihana fanomezana marika tsara indrindra ho an'ny famolavolana famonoana Die-casting Enamel malefaka enamel fiderana Metal mpamokatra medaly miaramila sy ozinina | Hobrin
Medaly mari-bava fanomezana ho an'ny fanomezana mari-boninahitra famonoana ho faty Enamel malefaka enamel fiderana medaly miaramila miaramila
● Fanodinana: Fandatsahana / fametahana amin'ny maty
● Fitaovana: Zinc Alloy / Copper
● Fametahana: fanaingoana volamena / volafotsy / nikela, sns.
Ny medaly miaramila dia matetika ampiasaina hamantarana ny fahombiazana sy ny maha-zava-dehibe azy. Amin'ny Moyen Age, ny olona manankarena sy mahery dia manisy sokitra ny sariny sy ny sarisary amin'ny medaly. Ny medaly dia namboarina manokana, amin'ny fampiasana endrika, habe ary fitaovana isan-karazany. Ny tafika manerantany dia manohy mampiasa medaly ho fampisehoana fampisehoana zava-bita, laharana ary zom-pirenena. Ny medaly miaramila dia ho mariky ny fahasahian'ilay mpiady.
Ny tafika manerantany dia namorona medaly miaramila namboarina mba hanehoany ny zava-bitan'izy ireo sy ny serivisiny ho an'ny firenena ary io fomba amam-panao io dia mbola mavitrika be ankehitriny. Handravaka ny fanamiany amin'ny medaly azony ireo mpiady.
Mandritra ny fandriam-pahalemana, ireo veteranina sy ireo mpankafy miaramila dia hanao fanamiana miaramila sy medaly miaramila ho fahatsiarovana ireo taonan'ny mahery fo.
● Fitaovana avo lenta. Ireo medaly miaramila ireo dia vita amin'ny firaka zinc, izay manana fiasa fanoherana ny harafesina ary azo tehirizina mandritra ny fotoana maharitra. Ny fitaovana rehetra dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
● Ity iray ity dia mety indrindra ho an'ireo mpanangona mitady haingon-trano miaramila, medaly *, medaly miaramila ary medaly fitiavana ny miaramila
● Izay rehetra tia tantara dia ho raiki-pitia amin'ity asa kanto kanto ity. Volavola azo entina sy azo entina. Ity medaly miaramila ity dia hanome fomba fitafy mety.
● Ny orinasa Dongguan Hobrin Badge sy Gift Co., Ltd dia manome medaly ho an'ny vondrona isan-karazany eran'izao tontolo izao. Manantena izahay fa hitondra ny traikefa anananay kilasy an'izao tontolo izao amin'ny ekipanay amin'ny alàlan'ny serivisy medaly namboarina. Fantatray fa ao ambadiky ny medaly samy hafa rehetra dia misy tantara tsy manam-paharoa, ka izay ny antony ilain'ny ekipa mpamolavola za-draharaha ny orinasanay hamorona medaly mendrika hampiroboroboan'ny ekipa rehetra.
Fampisehoana ny antsipirian'ny fampiasana
Teo aloha: Mpanamboatra sinoa kalitao vita amin'ny nika mainty nopetahany takela-by vita amin'ny metaly volamena
Manaraka: China factory namboarina mihodina marathon fihodinana mihazakazaka racer zinc firaka vy medaly amin'ny lanyard
Shina orinasa namboarina mihodina boribory mara ...